Geyigeenna - Hoygamaansada
Waxaa qoray Asha Mohamud Yusuf
Cirka oo gu’ hoorshoo
Godolkii la hibitiqay.
Xareeddii geyiga iyo
Godamada ka buuxdoo
Dhirtuna ay gun iyo baar
Gedafka isku haysoo
Faraqii is gaadheen
Hadba geesh codkoodii
Rahuna gaar isula baxay.
Oo labada goorood
Gabbalka iyo waagaba
Go’bo leeday dhibicdii.
Guudku wada casaadooy
Ay guudka qarisoo
Goryga iyo caawshiyo
Giirr qurux ugadhiyo
Hadaba geed magoolkii
Mayracad ku goostaan
Gees wayntu darartoo
Adhigiina godol yahay.
Isha aad la gaadhoo
Guriga ay ag daqaan.
Gabankii la jogiyo
Intay hadhac golaysteen
Halihii gobaad iyo
Gorad ay lahaayeen
Oo nirgii ku goohoo
Isu guuxay ololkii
Inta goor caweysina
Haaneedkii lala galay
Danbarkii ku gaaxdiyo
Laga gurayo ibihoo
Goroofkii la culay iyo
Gaawihii la buuxshoo
Gebiba beeshu negi tahay
Geesaha ka qubatee
Cidi weli galaan darain
Allahayow na garansii.
Cirka oo gu’ hoorshoo Hillaac galalacleeyiyo Daruuruhu gufaacada Guur guurayaano